Apple haibvumire kuvandudzwa kwezvakawanda zvekuChinese zvinoshandiswa muApp Store | IPhone nhau
Apple yakaomesesa kuvandudzwa kwezviuru zvemitambo zviripo muApp Store, nekuti izvi havana kupa rezenisi rinoenderana kubva kuvatongi venyika. Kwekupedzisira Kukadzi, Apple yakatumira email kunharaunda yevanogadzira munyika ino ichivarayira nguva yekupedzisira yekupa rezinesi iri, musi wa30 Chikumi.
Tiri muna Chikunguru 2 uye sekuzivisa kwakaita Apple vagadziri vacho, zvese zvakagadziridzwa zvemitambo izvo vakamirira kubvumidzwa vakaremadzwa zvachose kusvikira Apple yawana rezinesi rinoenderana nayo.
Hurumende yeChina yakagadza ichi chibvumirano chitsva muna2016, asi zvakazosvika mwedzi mishoma yapfuura, payakatanga kuchishandisa, kuti ive nehutongi hukuru (sekunge izvo zvaive zvisina kukwana) pamusoro mitambo inowanikwa munharaunda yako.
Sekureva kwaTood Kuhns, maneja wekushambadzira weboka reApp rekubvunza muChina, danho iri nehurumende yeChinese zvinogona kureva kurasikirwa nemamiriyoni emamiriyoni emadhora.
Hapana ari pachena kuti Apple yakwanisa sei kudzivirira kuteedzera mutemo weRisense we2016 kwenguva yakareba zvakadaro. Asi tichifunga kuti hondo yekutengeserana pakati peUS neChina yakatanga kupisa kutanga kwegore rino, danho iri harishamise.
Iyo App Store inofungidzirwa kuti inokomberedza mazana makumi matanhatu ezviuru zvemapurogiramu emitambo muChina, mitambo yemahara inosanganisira yekutenga-mukati meapps pamwe nemamwe mazita ane mutengo wakatarwa. Inofungidzirwa kuti zviremera zveChinese zvakapa marezenisi anodarika makumi mana nemazana mana ezviuru mumakore achangopfuura kubvira 60.000, ayo 1.570 vakapihwa gore rapfuura.
China yakaisa kukoshesa kukuru mumakore achangopfuura dzora mhando yemitambo inowanikwa munyika. Muchokwadi, kudzamara PUBG Mobile isina kuvhura yakasarudzika vhezheni yenyika ino uko vakafa vevavengi vanoratidzwa zvakasiyana, iri zita rakanga risingawanikwe muzvitoro zvekushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Apple haibvumire kugadzirisa kune akawanda maChinese maapplication paApp Store
Apple inobhadhara $ 120 mamirioni kukodzero ku "Emancipation" inotarisana naWill Smith
WhatsApp ichawedzera zvimiti zvine hupenyu, QR kodhi uye yakasviba modhi kuWhatsApp Web